Kugaya - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek ine michina yemhando yepamusoro yekukupa iwe yakawanda yeCCC machining services, kusanganisira yekugaya, kutendeuka, EDM, waya yekucheka, pamusoro pekukuya uye nezvimwe. Tinoshandisa kupinza 3, 4 uye 5-akabatana CNC machine nzvimbo kukupa mukuru nemazvo, zvinoshamisa mukana wokushandiswa, uye vakadzikama goho nokuti anenge chero machine chirongwa. Isu hatina chete michina yakasiyana, asiwo timu yenyanzvi, yakazvipira kukupa iwe neakanakisa-mukirasi sevhisi muChina. Makanika edu ane hunyanzvi anogona kushandisa akasiyana epurasitiki uye esimbi zvinhu kugadzira kutendeuka uye kugadzira zvinhu.
Tinokuvimbisai kuti zvisinei nekukura kwebasa racho, nyanzvi dzedu dzinozvibata sekunge ndezvavo. Tinogona zvakare kupa prototype CNC michina masevhisi ayo angakubatsire iwe mukuwana yakajeka mufananidzo weiyo yekupedzisira chigadzirwa.
K-Tek inyanzvi mune chaiyo michina zvikamu kugadzira. Specialty Yakabatanidzwa masevhisi akaremekedza hunyanzvi uye maitiro. Mainjiniya edu achashanda newe kuti uve nechokwadi chakanyanya dhizaini yekugadzira uye musangano. Kwakanaka kusevenza kwevatengi uye kugutsikana zvinozivikanwa zvekambani yedu uye hwaro kune redu bhizinesi kubudirira.
Zvakakodzera nguva -Isu tinonzwisisa kuti zvimwe zvikamu zvebasa redu zvine nguva yekupedzisira, uye isu tine hunyanzvi nemaitiro ekuona kuti tinosvitsa nenguva pasina kukanganisa hunhu hwebasa ratinoita.
Ruzivo -Tave tichipa CNC azvikuya mabasa kweanopfuura makore gumi. Isu takaunganidza akasiyana siyana epamberi ekugaya michina yeakasiyana maitiro uye vane ruzivo timu yeinjiniya nevashandisi kuti vape zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vese vatengi vedu.
Unyanzvi - Nekusiyana kwemachina edu, isu tinokwanisa kuvimbisa kurongeka kwezvinhu zvese muhukuru hwese.
Yakaderera-Vhoriyamu Kugadzira - Kugadzira mumavhoriyamu mashoma ndiyo mhinduro yakanaka yekugadzirisa zvinyorwa zvako uye kuyedza musika usati waburitsa huwandu hwakawanda. Kusarudza Yakaderera-Vhoriyamu Kugadzira ndiyo yako yakanyanya kunaka sarudzo.
Nemazvo azvikuya And vakarongeka CNC Systems
Nedu chokurukisa inotonhorera zvitengeswa, tinogona kutema zvinhu nekukurumidza kupfuura mureza inotonhorera akapfapfaidza masisitimu, uye yedu CAD / CAM, UG uye Pro / e, 3D Max. inogona kunyatso kuwirirana nevatengi nehunyanzvi uye zvakanyanya Kumhanyisa maitiro ese uye nekukupa iwe zvigadzirwa zvine hunyanzvi. Yedu miviri yakatwasuka CNC yekugaya nzvimbo inoratidzira otomatiki matinji ekutenderera ayo anotibvumidza isu kumuchina chero kona. Pamwe chete nekushandisa zvishandiso zvakaurungana, izvi zvinotibvumidza kuti tiwane yakafanana geometry yakaoma senge chero mashanu-akabatana muchina.
Hunhu hwedu CNC Kutendeuka
1.CNC lathe dhizaini CAD, dhizaini dhizaini modularization
2. Kumhanya, kukwirisa uye kutendeseka kwakakwirira
3. Kunyangwe izvo zvekutanga zvinowanzo tenderera, zvinogona kuve mamwe maumbirwo, akadai sekwere kana hexagon. Imwe neimwe tambo uye saizi inogona kuda yakatarwa "clip" (subtype yekollet - ichigadzira kora yakatenderedza chinhu).
4. Kureba kwebhawa kunogona kusiyana zvichienderana nemudyiri webhawa.
5. Zvishandiso zveCNC lathes kana nzvimbo dzinotendeuka dzinoiswa pakombuta-inodzorwa turret.
6. Dzivisa maumbirwo akaoma senge akareba matete zvimiro
Zvishandiso zvatinoshanda nazvo
Izvo zvinhu zvakasiyana siyana zvatinoshanda nazvo zvinosanganisira, asi hazvina kuganhurirwa kune:
Simbi isina ngura Titanium Delrin Peek
Brass Inconel Polypropylene Lexan
Aluminium Hastelloy UHMW Acrylic
Mhangura Super Duplex PVC Phenolics
Chando chakakungurudzwa simbi Ndarira Acetal Teflon
Nickel chiwanikwa Monels PVC PTFE
Carbon Fibhi Yese Alloy Steels Zvinhu zvenaironi POM
Mechanical Surface Kurapa Jecha nenyunje, akapfura nenyunje, vachikuya, Rolling, makorari, Brushing, Spraying, Painting, Oil Painting etc.
Chemical Surface Kurapa Bluing uye Blackening, Phosphating, Pickling, Electroless yakanamirwa pamifananidzo pamusoro Various Metals uye Alloys etc.
Electrochemical Surface Kurapa Anodic Oxidation, Electrochemical makorari, Electroplating etc.
Yemazuva Ekumusoro Kurapa CVD, PVD, Ion kudyara, Ion ra, Laser Surface Kurapa etc.
Jecha nenyunje Dry Sand nenyunje, Wet Sand nenyunje, Atomized Sand nenyunje etc.
Kupfapfaidza Electrostatic Spray, Mukurumbira Spraying, Powder Spray, Plastic Spraying, Plasma Spraying
Electroplating Mhangura yakakwenenzverwa, Chromium ra, Zinc ra, Nickel ra